Xukuumadda DDS Oo Ka Arrinsanaysa Inay Ka Baxdo Xisbiga EPRF Ee Ay Bah-wadaagta Ahaayeen Iyo Nuxurka Shir Ka Dhacay Madaxtooyada - Jigjiga Online
HomeSomalidaXukuumadda DDS Oo Ka Arrinsanaysa Inay Ka Baxdo Xisbiga EPRF Ee Ay Bah-wadaagta Ahaayeen Iyo Nuxurka Shir Ka Dhacay Madaxtooyada
Xukuumadda DDS Oo Ka Arrinsanaysa Inay Ka Baxdo Xisbiga EPRF Ee Ay Bah-wadaagta Ahaayeen Iyo Nuxurka Shir Ka Dhacay Madaxtooyada
Jigjiga (JigjigaOnline) – Xukuumadda Dawladda Deegaanka Soomaalida iyo xisbiga XDS ayaa ka tashanaya inay ka baxaan xisbiga ay bah-wadaagta yihiin ee EPRF, kaas oo muddo 27 sannadood ah ay ka tirsanaayeen.
Xisbiga maamula DDS ee XDS ayaa shir ay masuuliyiintiisu maanta ku yeesheen xarunta madaxtooyada Dawladda Deegaanka, waxay kaga tashadeen jihada cusub ee ay u dhaqaaqayaan iyo xisbiga ay ku biiri doonaan doorashooyinka sannadka dambe ka qabsoomi doona dalka Itoobiya.
Kulankan oo ay ka qayb-galeen madaxweynaha Dawladda Deegaanka Mustafe Muxumed Cumar oo ah Guddoomiye ku-xigeenka xisbiga XDS, madaxweyne ku-xigeenka Aadan Faarax iyo xubnaha guddida furlinta ayaa waxay kaga doodeen xisbiga qaran ee ay ka mid noqon doonaan amaba bah-wadaagta la noqon doonaan, taas oo ka ka dhigan in aanay kasii mid ahaan doonin xisbigii EPRF ee muddada dheer talada soo hayey.
Deegaanka Soomaalida oo ah midka ugu dhulka weyn Killillada dalka, sidoo kalena ah deegaanka saddexaad ee ay dadka ugu badan ku nool yihiin ayaa waxa masuuliyiinta waqtigan majaraha u haysaa ay doonayaan in ay si dhab ah uga dhex muuqdaan siyaasadda guud ee dalka Itoobiya, ayna muujiyaan in Soomaalidu ay yihiin kuwo muhiim ah oo dhinaca ay raacaan ay guushu u dheelliyeyso.
Sidoo kale, waxa masuuliyiinta uu hormoodka u yahay madaxweyne Cagjar, ayaa waxa ka go’an in si dhab ah ay usoo bandhigaan in Soomaalidu ay yihiin hormoodka dalka, kuwaas oo majaraha u qaban kara, la’aantoodna aanu xisbi qaran dhaqaaqi karaynin.
Shirka maanta ayaa waxa dood laga yeeshay saddex qodob oo kala ahaa:
1) Danta inoogu jirta xusbi waynaha maxay tahay?
2) Ma hogaamin karnaa asxaabta Itoobiya ee sii kala jeeda?
3) Ka Somali ahaan maxaa inala gudboon oo aan la gogol tagnaa?
Si kastaba ha ahaatee, Doorashooyinka guud ee la filayo in sannadka 2020 ay ka qabsoomaan Itoobiya ayaa waxay Soomaalidu ku muujin karaan doorkooda siyaasadeed, iyagoo kaga bixi kara liitinimadii hore iyo yasitaankii lagula kici jiray.
Aasaasaha Twitter-ka oo cinwaankiisa laga jabsaday
Maxaa Kenya ku khasbay inay codsato dib u dhigista dacwadda muranka badda ee Soomaaliya?